Eritrereto Ireo Fitahiana - Thomas S. Monson
Eritrereto Ireo Fitahiana
Mahafantatra ny zavatra ilaintsika ny Raintsika any an-danitra ary hanampy antsika izy rehefa mangataka fanampiana Aminy isika.
Ry rahalahy sy anabavy malalako, ity fihaonambe ity dia manamarika ny faha-49 taona nitsingerenan’ny nanohana ahy ho mpikambana ao amin’ny Kôlejin’ny Apôstôly Roambinifolo, ny 4 Ôktôbra 1963. Fotoana lava izany hoe sivy amby efapolo taona izany. Kanefa toa tena fohy ihany ny fotoana amin’ny lafiny maro hatramin’ilay nijoroako teto amin’ny polpitra ary nanaovako ny lahateniko voalohany indrindra nandritra ny fihaonamben’ny Fiangonana.
Zavatra maro no niova hatramin’izay 4 Ôktôbra 1963 izay. Miaina ao anatin’ny fotoana miavaka eo amin’ny tantaran’izao tontolo izao isika. Nahazo fitahiana tena maro isika. Kanefa sarotra indraindray ny mijery ireo olana sy fanomezana vahana ny fahotana manodidina antsika ka tsy ho lasa kivy. Nahita aho fa raha maka bahana kely isika sy mieritreritra an’ireo fitahiana eo amin’ny fiainantsika, ary ao anatin’izany ireo fitahiana izay toa kely sy matetika tsy tsikaritra dia hahita fifaliana bebe kokoa isika, toy izay tsy hanao afa-tsy ny hieritreritra ny lafy ratsin’ny fiainana.
Rehefa nanao tamberina an’izay 49 taona izay aho dia nahita zavatra vitsivitsy. Ny iray dia hoe, maro be ireo zavatra niainako izay tsy voatery hoe ho eritreretin’ny olona ho mahatalanjona. Matetika no toa tsy tsikaritra ary toy ny zavatra mahazatra mihitsy aza izy ireo raha ny marina rehefa nitranga. Kanefa rehefa averina jerena dia nampivelatra sy nitahy fiainan’olona izy ireo—ka tafiditra ao anatin’izany ny ahy. Manoro hevitra ny mba hanaovanareo izany koa aho—izany hoe, manao jery todika amin’ny antsipiriany ny fiainanao ianao ary mitady manokana an’ireo fitahiana, lehibe sy kely izay azonao.
Ny fanaovako jery todika manokana an’ireo taona maro ireo dia namerina nanamafy tsy tapaka ny fahalalako fa heno sy valiana ny vavaka ataontsika. Fantatsika tsara ilay fahamarinana hita ao amin’ny 2 Nefia ao amin’ny Bokin’i Môrmôna: “Misy ny olona mba hahazo fifaliana.”1 Mijoro ho vavolombelona aho fa ny ankamaroan’izany fifaliana izany dia tonga rehefa miaiky isika fa afaka mifandray amin’ny Raintsika any an-danitra amin’ny alalan’ny vavaka ary ho heno sy ho valiana ireo vavaka ireo—angamba mety tsy hovaliana amin’ny fomba sy ny fotoana itiavantsika azy izany, saingy tsy maintsy ho valiana izany ary hovalian’ilay Ray any an-danitra izay mahafantatra sy tia antsika tanteraka ary maniry ny hahazoantsika fifaliana. Moa ve Izy tsy nampanantena antsika hoe: “Aoka ianao hanetry tena ary ny Tompo Andriamanitra dia hitarika anao amin’ny tanana sy hanome anao ny valin’ny fivavakao.”